Ukuze ukhanyise noma yikuphi ukugubha kuyo yonke inkazimulo yayo, udinga ukukhetha hhayi kuphela amahle, kodwa futhi "ingubo" efanele! Ukungahleleki kwesibalo kungafihlwa yinoma yisiphi isembatho, into eyinhloko ukuthi uhlezi kahle kuwe. Kwakungeyona encane noma enkulu. Abesifazane abaningi, bezama ukufihla amafomu abo obuhle, bathenge into yobukhulu obukhulu. Lena iphutha elikhulu. Izambatho ezinjalo, ngokuphambene nalokho, zizogcizelela amaphutha akho. Akudingekile ngaphambi kwanoma imuphi umcimbi obalulekile ukuba ubalekele egymini futhi lapho uzikhandla, ukuze ulahlekelwe isisindo. Noma uhlale ngokudla okunzima, uphupha ngaphambi kosuku olubalulekile ukuba lube mncane. Zonke iziphutha zalesi sibalo zifihliwe yizingubo. Indlela yokuyikhetha ngokufanele, sizoxoxa kulokhu kulesi sihloko.
Cabanga ngezindlela zokugqoka ezingamantombazane anamafutha.
Sifihla ngemuva kwamagagasi
Kumantombazane anjalo, phezulu kwesigqoko kufanele kugcizelele isithunzi sabo: amabele amahle, amahlombe, okhalweni. Isiketi esikhanyayo phansi sizofihla iziqhenqo ezinkulu. Ubude obude - nje ngezansi kwamadolo.
I-front of the dress igqoke amafolda aqondile. Lokhu kubhebhezela imigqa yesibalo bese kudonsela ngaphandle. Futhi inkinga yakho yendawo inkinga.
I-dress-case ngokwayo iyimodeli emangalisayo yalesi sibalo, i-asvetlaya instical vertical yenza kube nenhle kakhulu, kuhlanganise nasezinkalweni.
Manje cabanga ngengubo kulabo abanesisu, futhi ngubani ongakulungeli ukuwuveza emphakathini obazungezile. Zonke izinkinga zingaxazululwa ngengubo efanele.
Ingubo egqoke ngephunga izokukwenza ube mncane. Ungakhathazeki ngemibimbi esiswini sakho, i-boot belt-belt izofihla konke okungenakuqhathaniswa!
Ukusika okulula, isitayela esiqondile ... Kodwa yeka iphethini! I-zebra edibeneyo phakathi ihlukanisa ukunakwa emzimbeni. Kodwa ingubo akufanele ibe yincetu, ngaphandle kwalokho yonke isithombe singaphazamisa i-crease ebonakalayo esiswini.
Iphunga elinjalo, njengokungathi liphikisa isibalo, lenza kube lukhulu kakhulu. Isigqoko esinamabhande ohlangothini lwaso kanye neminyango kusukela esihlalweni seminyango ifihle imvu.
Futhi manje igqoke, kulabo abanezinkuni ezinobuthi. Ngosizo lwe-oda bangakwazi ukufihla ukuze kungabikho ozoqagela ngale akhawunti yakho encane.
Indwangu eqondile yindlela enkulu kuwe! Into esemqoka - ungawuqedi ibhande. Isikhwama sidinga ukukhonjwa kancane, ukuze kutholakale ushintsho olushelelekile kuze kube sezinqulwini.
Isiketi salesi sigqoko kufanele sigqunywe esiceleni, ngakho-ke imisila enhle. Bafihla izinkinobho ezikhahlelayo. Kuhle uma sigqoko sinomuthi okhangayo.
Lesi sitayela siyi-wand-wand enezintambo ezigcwele. I-Baska iyinhlanhla ebhande lakho. Ihamba kahle imigqa yesithunzi futhi ibukeka iguqula indawo yenkinga.
Cabangela izinketho zabanikazi bomshini omuhle kakhulu. Amantombazane amaningi aphupha ngezindlela ezinjalo, aze alale ngaphansi komsizi wokuhlinza ukuze athole lokho afuna. Awudingi lutho lokufihla lapha, okuphambene nalokho, isithunzi sakho. Kodwa uma ucindezelekile ngalokhu, ngakho-ke yini engadingeki ukuthenga izingubo ukuze zibukeke zikhangayo?
Ngokusobala ukunciphisa amabele akho amahle angakwazi ukugqoka ngephethini ephrintiwe. Futhi okuncane kuyoba, i-bust yakho encane izobukeka.
Uma ubeka isihloko esibucayi ngaphansi kwesigqoko sakho, khona-ke ukusika okujulile kwe-V kuzokwenzela ngesikhathi esisodwa ukubonisa ukunakekelwa kwesikhumba futhi kwenze kube lula kakhulu.
Iphunga ngokwayo lifihla isifuba esikhulu, futhi izakhi zokuhlobisa ezinqeni nasemahlombe ziyasiza. Bahlehlisa ukunakwa kwabo.
Manje uyazi zonke izimfihlo zobuhle. Ngakho-ke, ngaphambi kokuya esitolo, funda lolu lwazi ngokucophelela futhi uphume izifundo kusukela kamuva.
Kanjani kahle ukugqoka kumantombazane aphelele?
Izingubo zesitayela zesiFulentshi ezivamile
Kissel kusuka ku-gooseberries
Umkhiqizo onobuhle wokunakekelwa kwansuku zonke
NgoFebruwari 23 - umlando weholide - Umlando Omfushane weSuku Lokuvikela Sezingane Zase-Defender of the Fatherland
I-pasta neklabishi esetshenzisiwe kale
Iyini imibala engu-3d yezinwele?
Indlela yokupheka ukudla kwasekuseni okusheshayo nokuhlwabusayo?
Bhisikidi ukhilimu omuncu ikhekhe nge-fondant
Okubangela ukuzwa kwemizwa yabesifazane
Izinwele ze-Festive izinwele ezimfushane
Amazwi amahle okubonga uthisha - amamaki ayisisekelo kanye nokugcina 9.11 - abazali nabafundi
Ukunakekelwa kahle kwezipikili zejel